महामारीको समयमा अग्रपङिक्तमा रही काम गरिरहेका सबैप्रति सम्मान गर्न बारको आग्रह -महामारीको समयमा अग्रपङिक्तमा रही काम गरिरहेका सबैप्रति सम्मान गर्न बारको आग्रह -
| Sun, 20, Sep, 2020
होमपेज / ३ नं. प्रदेश
महामारीको समयमा अग्रपङिक्तमा रही काम गरिरहेका सबैप्रति सम्मान गर्न बारको आग्रह
८ भाद्र २०७७, सोमबार २०:१६ मा प्रकाशित
काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएशनले महामारीको समयमा अग्रपङिक्तमा रही काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सङ्क्रमित बिरामीलगायत सबैप्रति सम्मान गर्न आग्रह गरेको छ । महासचिव लिलामणि पौडेलले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा दिनरात नभनेर, भोकै, अनिदै सङ्क्रमण नियन्त्रण र उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सङ्क्रमित बिरामीलगायत सबैप्रति आदरभाव राखी मनोबल उच्च गराउनेतर्फ अग्रसर हुन आग्रह गरिएको छ ।
बारले गलत अनूचित गतिविधिमा संलग्नउपर कारवाही गर्न र संविधानले प्रदान गरेको नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको निर्वाध प्रचलन गराउने व्यवस्था मिलाउन सरकार र सम्बन्धित निकायसँग माग गरेको छ । पछिल्ला केही हप्तामा नेपालमा कोभिड–१९ को सङ्क्रमणको संख्या बढ्दै गएको छ । चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षाकर्मी आफ्नो घर, परिवार, भोक, चिन्ता सबै बिर्सेर आमनागरिकलाई कसरी जोगाउन सकिन्छ भनि पर्याप्त सुविधाको अभावमा पनि अहोरात्र कार्यक्षेत्रमा खटिइआएका छन् । उनीहरुको कामप्रतिको समर्पण भाव र जिम्मेवारीप्रति बारले आभार व्यक्त गरेको छ ।
कोरोना सङ्क्रमणबाट स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीलगायत कोही पनि पेशा व्यवसाय गर्ने व्क्ति अछुतो रहन सकेका छैनन् । सङ्क्रमणबाट बिरामी परेका र सङ्क्रमण मात्र देखिएका व्यक्तिको आत्मबल बढाउने खालका गतिविधि गर्नु सबैको कर्तव्य हुनुपर्नेमा कतिपय ठाउँमा सङ्क्रमण र सङ्क्रमणबाट निको भइसकेका व्यक्तिलाई समेत समाजले राम्रो व्यवहार नगरेको भनि पढ्न र देख्नु दुखदायी कुरा भएको बारले जनाएको छ ।
अझ त्यसमा पनि हालै काठमाडौं, चितवन, मोरङ, संखुवासभा, जाजरकोटलगायतका जिल्लामा स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सक, स्वास्थ्य संस्था, आइसोलेशन वार्ड लगायतमा भएका असामाजिक, अभद्र व्यवहारबाट अत्यन्त लज्जा र
आइसोलेशनबाट भागेका थुनुवा काभ्रेमा पक्राउ
योञ्जनलाई संघीय सांसद दोङ र प्रदेश सभा सदस्य ढकालद्धारा सहयोग हस्तान्तरण
तिनधारे झरना : के हो विवाद ?
घुमथाङ पहिरो : मृत्यु हुनेको सङ्ख्या १३ पुग्यो,बेपत्ता १८ को खोजी जारी (अपडेट)
राम्रो सन्देशको जानकारी पछि काभ्रे युवा उद्यमी मञ्चको सहयोग
वाग्मती प्रदेशले कोरोना नियन्त्रणका लागी १८ करोड २६ लाख रकम उपलब्ध गराउने
गाउँपालिका कार्यालयमा १० दिनदेखि तालाबन्दी, कामकाज ठप्प
६ वर्षको उमेरमा सिक्सप्याक बनाएर प्रख्यात भए यी बच्चा (भिडियो)
नेकपाको बैठकमा मन्त्रीपरिषद् पुनर्गठनको विषयमा छलफल ।
महामारीकै बीच अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महत्वपूर्ण चार आयोजना सम्पन्न
सिन्धुपाल्चोक पहिरो: मुख्यमन्त्री पौडेलद्धारा दुःख व्यक्त
कोरोनाको जोखिममा पनि मजदुरहरु सक्रिय, गरे मल्लकालीन पुलको सरसफाई
मन्त्री दुलालद्धारा लिदि पहिरो बिस्थापितलाई राहत हस्तान्तरण
कतै लामो दूरीको लाभदायी यात्रा गर्नु छ भने आज राम्रो हुन्छ । सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने समय छ । विश्वासपात्रबाट धोका हुन सक्छ, सजग रहनुहोला। निर्णय लिएर पनि शंका गर्ने बानीले पछि परिनेछ। परिस्थितिअनुसार चल्न नसक्ता दुस्ख पाइनेछ । महत्त्वाकांक्षी योजना कार्यान्वयनमा आफ्नैले बाधा पुर्यासउन सक्छन्। अरूको फाइदाका लागि उपयोग भइने सम्भावना छ। मान्यजनको मन जित्ने प्रयत्न गर्नुहोला।
अध्यात्मभाव जागृत हुनाले परोपकारमा मन जानेछ। धेरैले कामको तारिफ गर्नेछन्। शुभचिन्तकहरूले साथ दिनाले पहिलेको चुनौती समाप्त होला। दाम, इनाम र प्रतिष्ठा कमाउने बेला छ। नयाँ ज्ञान प्राप्त हुने योग छ । आर्थिक लाभ प्राप्त होला । ठूलाबडाको आशीर्वादले रोकिएको काम बन्नसक्छ । मेहनतले पदीय जिम्मेवारी दिलाउनेछ । विशेष अवसर प्राप्त हुनाले मन प्रफुल्लित हुनेछ। टाढिएका साथीभाइ नजिकिनाले हर्ष बढ्नेछ। भाग्यले विभिन्न अवसर थमाउनेछ।
समस्या दर्साउँदा सहयोगीहरूको समेत साथ प्राप्त हुनेछ। काम पूर्ण नभए पनि प्रयत्न गर्दा आंशिक लाभ अवश्यै हुनेछ।कल्पना र भावनामा केन्दित भइने छ । बोलीको विपरीत अर्थ लाग्न सक्छ, मुखलाई नियन्त्रणमा राख्नुहोला । चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी वहन गर्नुपरे पनि बुद्धि–विवेकले काम गर्न सकिनेछ। अप्ठ्यारा परिस्थितिसँग सम्झौता गर्नुपरे पनि आत्मविश्वास, मिहिनेत र लगनशीलताले लक्ष्यमा पुर्या्उनेछ।
पढाइको लगावले बौद्धिक क्षेत्र फराकिलो बन्नेछ र लेखन कलामा निखारता आउनेछ। अध्ययनका लागि भ्रमणको मौका जुट्न सक्छ । व्यापारमा सामान्य फाइदा भए पनि पशुपालन र कृषि क्षेत्रबाट राम्रो लाभ हुनेछ । रोकिएका काम बन्नाले नयाँ कामतर्फ अग्रसर भइनेछ। पढाइलेखाइमा प्रगति हुनेछ । बौद्धिक प्रतिस्पर्धामा सफलता हात पर्ला । पशुपालन तथा कृषि क्षेत्रबाट राम्रो लाभ मिल्ने योग छ । प्रतिष्ठित काम गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । दिन उत्साहपूर्ण रहनेछ ।
तपाईंको आईतबारको दिन कस्तो रहनेछ-राशिफल राशी
आज शुभ कार्यको चर्चा चल्नाले मनमा शान्ति छाउनेछ । दाम्पत्य जीवन सुखमय हुनेछ । आर्थिक क्षेत्रमापनि राम्रो सफलता मिल्ला ।
आज अधिकार प्राप्तिका लागि संघर्श गर्नु पर्ला । महत्त्वपूर्ण अवसर गुम्न सक्नेछ । घर परिवारमा झै–झमेलाको अवस्था आउन सक्छ ।
आज आतिथ्यपूर्ण सम्मान पाइएला । वैदेशिक कार्य अघि बढ्नेछ । आफन्त संग भेटघाट हुनेछ । नयाँ वस्त्र एवं अलंकार प्राप्ति हुनेछ ।
आज कीर्तिमानी काम गर्ने समय छ प्रेमसम्बन्ध र प्रणयप्रसङ्गका लागिपनि श्रेष्ठ समय रहेकोछ । शुभकार्यको चर्चा चल्नेछ ।
प्रेम सम्बन्ध कसिलो होला । नयाँ ज्ञान सिक्ने मौका मिल्नेछ । बौद्धिक काममा सफलता मिल्नेछ । दाम्पत्य सुखले प्रफुल्लित भइनेछ ।
आज नयाँ कमको थालनी हुनेछ । धार्मिक र सेवा भाव बढ्ने योगछ । सद्विचारले अभिप्रेरित हुनेहरूलाई बिस्तारै लाभ हुनेछ ।
आज आफूले काम देखाएर अरूको मन लोभ्याउन सकिनेछ । नयाँ कार्यको योजना बन्नेछ । कार्य सम्पादनमा सहजता मिल्नेछ ।
आज महिला वा मित्रबाट विशेष सहयोग मिल्नेछ । श्रमको उचित मुल्याङ्न हुनेछ । दिनको उत्तरार्ध बढी सुखद् रहने देखिन्छ ।
आज महिला वर्ग बाट विशेष सहयोग मिल्नेछ । वैदेशिक कार्य अघि बढ्नेछ । व्यवसायका लागि छोटो यात्राको सम्भावना पनि छ ।
आज राजनैतिक कार्यमा बाधा आउनेछ । नाक तथा घाँटीमा समस्या आउला, तर अभिभावकको आशीर्वादले काम गर्नसक्छ ।
आज मंगल र शुभकार्यको चर्चा चल्नेछ । राजनैतिक कार्यमा सफलता मिल्नेछ । अनुहारमा कान्ति र मनमा शान्ति छाउला ।
आँटेको र ताकेको कार्य पुरा होला । ठीक समयमा सही निर्णय लिन सकिनेछ । शैक्षिक क्षेत्रमा प्रगति नै होला । बोलीको प्रभाव पनि बढ्नेछ ।